23 / 09 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Sebtember 23, 2018
Adeega YHT ee Haydarpaşa
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Maareeyaha Guud ee TCDD ee xeryaha magaalada İsa Apaydınraacay tijaabooyin tijaabooyin ah iyada oo laga qayb galayo. Wasiirka Turhan oo jooga Feneryolu Stop ka dib wadista imtixaanka [More ...]
Sakarya MTB Cup Neef
Tartanka Caalamiga ah ee Mountain Bike Maalintii ugu horreysay ee Sakarya MTB Cup, 30 waddan waxaa lagu qabtay Sunflower Bicycle Valley iyadoo ay ka soo qeybgaleen in kabadan ciyaartooyda 150. Baaskiillada Ruushka Timofei Ivanov wuxuu ku tartamay qeybta 'Elite Men' wuxuuna ku guuleystey billadaha dahabka [More ...]
500 Baaskiil Pedal waa la laalay 42 iyadoo la taageerayo IBB!
Marka la eego baaxadda Hareket Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub ee uyla oo ay weheliso hay'adda Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, 500 waxay u jirsatay 42 kiiloomitir oo ka socota Dhismaha İBB Saraçhane iyadoo la adeegsanayo baaskiil ilaa Madaarka Cusub. 16 - 22 Sebtember Yurub [More ...]
Samsun dadka degan ayaa ka maqan safarkooda tareenka!
Khadadka tareenka, oo in muddo ah u xirnaa howlo dayactir ah oo ka socda Samsun, ayaa la gelin doonaa dhowaan. Dadka deegaanka Samsun waxay doorbidaan safarro tareen oo loogu talagay raaxo iyo amaan [More ...]
CHP, Chorlu Taha Lose Hooyo Lagu Hayo Musiibo Tareen
Qoyska Bahar Koçman, oo ku dhintay musiibada tareenka ee magaalada Çorlu, waxay sugayaan in gobolka uu u fidiyo gacan caawinta carruurteeda AX-da X-sano ee Taha. CHP Kaftancıoğlu wuxuu booqday Cali Koçman, geerida gabadhiisa kadib hawlgabnimadiisii ​​dhimashada [More ...]
Dooxada Bariisku waa mid aad u fiican Saaka
Isagoo hadlayay ka dib tartamada Sakarya MTB Cup Elite Men, Duqa Magaalada Toçoğlu wuxuu yidhi, dik Waxaan si adag uga shaqeynay xaqiijinta ururka caalamiga ah ee magaaladeena. Waxay u diyaar garowday adeegsiga labada cayaaryahanadeena iyo dadkeenna. [More ...]
Maanta taariikhda: 23 September 1856 Tareenka Turkiga
Maanta Taariikhda 23 Sebtember 1856 Taariikhda Waddada Tareenka ee Turkiga waxay ka bilaabataa 1856. Khadkii ugu horeeyey ee tareenka 130 km İzmir - Khadkii Ayd wasn ayaa markii ugu horreysay qodista sanadkan la siiyaa mudnaan gaar ah oo la siiyay shirkad Ingiriis ah [More ...]